Caancala Meeshaalee - Jalaantoota - Jalaantoota jedhu filadhu
Lakkaawwii, haala, aabaatiin qubee xixiqqaa waliin qindeessuu. Galfata 26 warra jalqabaa booda, lakkaawwichi "aa" irratti deebi'ee eegala
Mata mataa Fuulaa
Lakkaawwii miiljaleewwanii gubee tokkoon tokkoon fuulaa irratti deebi'ee eegalaa. Dirqalaan kun kan jiraatu, yoo sanduqni filannoo Xumura fuulaa sun, bakka Qubannoo keessatti filatame qofa taha.
Mata mataa boqonnaa
Lakkaawwii miiljaleewwanii gubee tokkoon tokkoon boqonnaa irratti deebi'ee eegalaa.
Mata mataa galmee
Miiljaleewwan galmee keessatti tartiibaan lakkaawwessa.
Barruu isa, fuuldura lakkofsa miiljalee isa galmee keessaatti, mul'isuu barbaaddu saagi. Fakkeenyaaf, "Gara 1" mul'isuuf, "Gara" barreessi.
Barruu isa booda lakkofsa miiljalee isa galmee keessaatti mul'isuu barbaaddu saagi. Fakkeenyaaf, "1)" mul'isuuf, ")" barreessi.
Lakkoofsa miiljalee jalqabaa isa galmee keessaa galchi. Dirqalaan kun kan jiraatu, yoo sanduqa Lakkaawuu keessatti, "Baaqqee galmeetiin" filatame qofa taha.
Dirqalaan kun kan jiraatu, yoo bakka Qubanoo keessatti, sanduuqni filannoo Xumura Galmee filatame qofa taha.
Barruu isa, yeroo miiljaleewwan fuula ittaanaa irratti fufan, fakkeenyaaf "Fuula irratti fufe", mul'isuu barbaaddu galchi. Barreessaan LibreOffice, lakkoofsa fuula isa itti aanu ofumaan saaga.
Eegala fuula ittaanaa
Barruu isa, fuula isa miiljaleewwan irratti fufan , fakkeenyaaf "Fuula irraa fufe", mul'isuu barbaaddu galchi. Barreessaan LibreOffice, lakkoofsa fuula isa duraa ofumaan saaga.